उदयपुर स्वास्थ्य चौकी : सुत्केरीको रोजाई, वडाको बजेट फोकस – sunpani.com
उदयपुर स्वास्थ्य चौकी : सुत्केरीको रोजाई, वडाको बजेट फोकस
सुनपानी । १७ जेष्ठ २०७८, सोमबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – साँझ ५ बजेर ५६ मिनेट जादा गोसाईगुरुवाकी संगीता कोरीले छोरा जन्माइन् । बाबुगाउँकी सरोनी कनोजियाको राती ११ बजे १८ मिनेटमा छोरा जन्मियो । राती नै १२.५४ बजे लोनियनपुरकी पूजा चौहानले छोरी जन्माइन् ।
भोलीपल्ट अपरान्ह ४.४५ बजे गौरीपुरुवाकी सुनिता चौहानले छोरा जन्माइन् । ४५ मिनेट पछि नै ६ बजेर ३० मिनेटमा बालेगाउँकी निर्मला बढैले छोरी जन्माइन् । राती नै ७.२० बजे लोनियनपुरकी गीता लोनियाको छोरी जन्मियो ।
यो सुत्केरीको लाइन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १३, उदयपुरको स्वास्थ्य चौकीमा जेठ ९ र १० गतेको थियो ।
नेपालगञ्ज बजारदेखि अलिकति टाढा रहेको उदयपुर स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी हुने महिलाको पहिलो रोजाईमा पर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । स्वास्थ्य चौकीले वर्षमा एक सय ६२ जनाको सुत्केरी गराउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ १० गतेसम्ममा ५ सय ३१ जना सुत्केरी भइसकेको स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख टेकबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । यो स्वास्थ्य चौकीमा वर्षेनी सुत्केरी हुनेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । यहाँ आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा ३ सय ५ जना र ०७६-७७ मा ४ सय ५५ जना सुत्केरी भएका थिए ।
सुत्केरी हुने महिलाको चाप बढ्दो रहेकाले उदयपुरमा अनमीहरुलाई डे, नाइट डिउटीमा राखिएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा तीन जना नर्सिङ कर्मचारी (दुई जना सिनियर अनमी र एकजना अनमी) कार्यरत छन् । उनीहरु सधैंजसो व्यस्त नै हुने गर्दछन् । तीन जनामा पाँच-पाँच दिनको रोटेसन मिलाइएको छ । धेरै जना एकै दिन आउदा तिनै जना खटिन्छन् ।
उदयपुर स्वास्थ्य चौकीमा ७५ प्रतिशत बाहिरी वडाबाट सुत्केरी हुन आउँछन् । स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख केसीका अनुसार, हिरमिनिया, बेतहनी, पुरैना, पुरैनी, जयसपुर, भवानीयापुर, पिप्रहवा, परसपुर र केही बाहिरी जिल्लाबाट समेत आएका छन् । स्वास्थ्य चौकीमा अप्रेसनको सुविधा छैन । अप्रेसन गर्नुपर्नेलाई भेरी अस्पतालमा पठाउने गरिन्छ । सिनियर अनमी प्रेमकुमारी विसीले स्वास्थ्य चौकीमा आएका दश प्रतिशत रिफर हुने जानकारी दिनुभयो ।
गर्भवती जाँच गरिदै ।
सिनियर अनमी विसीले गएको तिहारको दिन (मंसीर १ गते) एकै दिन चार जना सुत्केरी भएको बताउनुभयो । ‘तिहारको दिन थियो । मलाई त भ्याइ नभ्याई नै भयो, सिनियर अनमी विसीले भन्नुभयो, चाडबाडमा झन् मलाई फुर्सद नै हुँदैन । अरु टाढाका घर गइहाल्नु हुन्छ । म यहीको भएकाले डिउटी आउनु पर्छ ।’
स्वास्थ्य चौकीमा डेलिभेरी बेड दुई वटा छ । सुत्केरी भएपछि राख्ने तीन वटा बेड छन् । धेरै जना सुत्केरी हुँदा राख्ने बेडको समस्या देखिन्छ ।
उदयपुरमा नियमित गर्भवती जाँचको अवस्था पनि राम्रो देखिन्छ । गर्भ जाँचका लागि पनि वार्षिक तारगेट एक सय ६२ जना छन् । चालु आर्थिक वर्षको बैशाखसम्ममा नियमित गर्भजाँच गर्ने एक सय ६१ जना छन् । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा २ सय ३५ र ०७५-७६ मा एक सय ७९ जनाले नियमित गर्भ जाँच गरेका थिए ।
अझ खुशीको कुरा त वडा नं. १३ मा पछिल्लो तीन वर्षमा मातृ मृत्यु भएको छैन । बाँकेमा गर्भवती सुत्केरीको मृत्युदर धेरै रहदा वडा नं. १३ मा पछिल्लो तीन वर्षमा कसैको ज्यान नगएको स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख केसीले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख केसीका अनुसार, वडामा अस्थायी साधन प्रयोग गर्ने ३३ प्रतिशत रहेका छन् ।
स्वास्थ्य चौकीले अस्पताल बराबरको सुविधा दिनुमा वडाध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर शाहको ठूलो हात रहेको छ । वडाध्यक्ष शाहले बर्थिङ सेन्टरका लागि विशेष फोकस गरेर बजेट छुट्याइदिने गर्नु भएको छ । बर्थिङ सेन्टरका लागि औषधी खरिद गर्न वडाले प्रत्येक वर्ष डेढ लाख रुपैया छुट्याउदै आएको छ । बर्थिङ सेन्टरका लागि सामान खरिद गर्न ५० हजार दिने गरेको छ । ६० हजारमा खानेपानी फिल्टर, प्रिन्टर खरिद, सोलार प्लान्ट वडाले गरिदिएको छ । पूर्ण खोपका लागि प्रत्येक वर्ष ५० हजार रुपैया दिदै आएको छ । वडाध्यक्ष शाहले अस्पतालको सरह नै सुविधा दिइरहेको उदयपुर स्वास्थ्य चौकीलाई वडाले प्राथमिकतामा राखेर बजेट दिने गरेको बताउनुभयो ।
आव ०७५-७६ मा उदयपुर स्वास्थ्य चौकीलाई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थाको रुपमा सम्मान गरेको थियो ।